Uyenza njani ikhalenda | Creatives Online
Ngalo lonke ixesha unyaka uqala, okanye ngalo lonke ixesha siqala iprojekthi, ukwazi ukwenza ikhalenda kunokuba ngomnye wemisebenzi eqhelekileyo esiyenzayo.
Ikhalenda asikuphela nje le ijinga eludongeni okanye esivumela ukuba sibe nayo (okanye iselula) kodwa ivumela ukuba sibhale imihla ebalulekileyo, iinkcukacha ezimele zithathelwe ingqalelo yonke imihla, njl. Kwaye ngenxa yoko akufuneki uchithe imali ukuyithenga. Unokwenza eyakho.
1 Kutheni usenza ikhalenda
2 Yintoni omele uyikhumbule xa usenza ikhalenda
3 Yenza ikhalenda kwiLizwi
4 Yenza ikhalenda kwi-Excel
5 Amaphepha e-intanethi ukwenza iikhalenda ezihonjisiweyo
Kutheni usenza ikhalenda
Khawucinge ukuba uyazisebenza kwaye usebenza nabathengi yonke imihla. Unabaninzi kwaye usebenza kuzo zonke. Kodwa umhla wokuhanjiswa, iintlanganiso, njl. yahlukile kwinto nganye. Kwaye uyathanda ukugcina iodolo kwaye uyazi into ekufuneka uyenzile yonke imihla.
Ukuba uyibhala phantsi loo nto kwincwadi yamanqaku, uya kugqiba ukubeka imihla ukuze ubone into omawuyenze suku ngalunye. Kodwa yincwadana.
Ngoku cinga ukuba wenza into enye, kuphela kwi-a Ikhalenda ozenzele yona, enokuba yeveki, ngenyanga okanye ngonyaka kwaye usuku ngalunye lunamanqaku omxhasi ngamnye ukwazi ukuba kufuneka wenze ntoni. Oku kunokubekwa kwitafile yakho, ixhonywe, njl. Ngaba ayizukubonakala ngakumbi?
Incwadi yokubhalela, okanye iphepha apho ubhala khona yonke into, okanye i-ajenda, inokuba sisixhobo esihle. Kodwa ikhalenda ikuvumela ukuba unxulumanise imihla kwimisebenzi kwaye ngokubonakalayo uyakubona ngcono kakhulu ukuba ungakanani umsebenzi onawo makwenziwe ngokwemini Okanye ukuba unoogqirha, ukuqeshwa kunye nabathengi, njl.
Yintoni omele uyikhumbule xa usenza ikhalenda
Ukwenza ikhalenda ngomnye weyona misebenzi ilula onokuyenza njengoyilo. Ewe, eneneni, yenye yezona zilula kodwa, kuxhomekeke kwizinto ozithandayo kunye nobuchule ofuna ukubunika yona, inokuba nzima ngakumbi okanye ngaphantsi.
Ngokusisiseko Ukwenza ikhalenda kufuna isixhobo esinye kuphela, njengeLizwi, i-Excel, iPhotoshop, amaphepha e-intanethi ... kunye nokuba nekhalenda esandleni (enokuba yikhompyuter okanye iselula) ukukukhokela ngemihla.
Umzekelo, cinga ukuba ufuna ukwenza ikhalenda kaJanuwari. Kuya kufuneka wazi ukuba loluphi usuku enye yazo ewela kulo ukuze uyiguqulele kuxwebhu lwakho kwaye ube nakho ukuyiprinta.
ecaleni, kwaye Njengokhetho, unokukhetha imizobo, i-emojis, imizobo, njl. oko kuya kwenza ikhalenda ngokwayo ibonakale ngakumbi.
Kodwa kuphela ngaloo nto unokusebenza.
Yenza ikhalenda kwiLizwi
Masiqale ngeshedyuli elula. Ungayenza ngeLizwi okanye enye inkqubo efanayo (OpenOffice, LibreOffice ...). Kufuneka wenze ntoni?
Vula uxwebhu olutsha. Sikucebisa ukuba ubeke iphepha ngokuthe tye kuba ukuba uyenza ngokuthe nkqo, ngaphandle kokuba iveki kuphela, ayiyi kukhangeleka kakuhle kwaye uya kuba nendawo encinci.
Nje ukuba ube nayo ngokuthe tye, kufuneka yenza itafile. Kwimiqolo kufuneka ubeke isi-7 kunye nemiqolo, ukuba yinyanga, isi-4 okanye isi-5. Ukuba ufuna loo veki kuphela, ibe nye kuphela. Ezimbini ukuba ufuna ukubeka iintsuku zeveki (ukusuka ngoMvulo ukuya ngeCawa okanye ukususela ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu (kuloo meko kuya kuba 5 iikholomu)).
Itafile iya kuba yincinci, kodwa kulapho unakho dlala ngesithuba phakathi kweeseli ukuwabeka wonke umgama olinganayo. Kutheni ukwandisa nje? Ewe, kuba udinga apho unokukhomba khona. Awuyi kubeka kuphela amanani ngosuku ngalunye, kodwa uya kushiya indawo yokubhala phantsi, umzekelo, intlanganiso kunye nomxhasi, uhambo lokuphumla, into omele uyenze imihla ngemihla, njl.
Eyona nto ilungileyo kule khalenda kukuba inyanga ithatha iphepha lonke, ke uyaqinisekisa ukuba ucace gca malunga nayo yonke imisebenzi ekufuneka uyenzile. Abanye, ngenjongo yokungenzi iinyanga ezahlukeneyo, into abayenzayo kukushiya kungenanto kwaye bayisebenzise njenge template. Oko kukuthi, amanani awawabeki, asuka ashiye itafile ingenanto ukuze, xa ishicilelwe, bawabeke baze basebenzise kwaamanye kwiinyanga ezahlukeneyo.
Ngale nkqubo eminye imifanekiso inokubekwa kodwa ulinganiselwe kwindlela ephathwa ngayo okanye apho ibekwe khona kanye.
Kwimeko apho ufuna ukuba nekhalenda epheleleyo kwiphepha elinazo zonke iinyanga, sincoma ukwenza iitheyibhile zenyanga nganye, ngendlela yokuba ekugqibeleni zonke zilungele kwiphepha elifanayo. Ingxaki kukuba awuyi kuba nandawo yokubhala nantoni na.
Yenza ikhalenda kwi-Excel
Enye inkqubo onokuyisebenzisa ukwenza ikhalenda yi-Excel. Isebenza ngokufanayo neLizwi kodwa ngendlela elula kakhulu kuba sele unayo itafile yenziwe.
Ngokukodwa, xa uvula i-Excel, konke okufuneka ukwenze kukubeka iintsuku (ukususela ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu okanye ukususela ngoMvulo ukuya ngeCawa) kwaye uthathe 4-5 imiqolo.
Nje ukuba ukhombe kuzo, yiya ekhohlo, apho amanani omqolo avela khona, kwaye ucofe iqhosha lasekunene lemouse. Apho, khetha Ubude beRow kwaye usete umgama ofuna kuwo loo miqolo (iya kukunika ngaphezulu okanye ngaphantsi indawo). Kubalulekile ukuba singadluleli ngaphaya kwephepha elinye (eliza kukuxelela nje ukuba wenze umboniso).
Ukongeza, phezulu kwiikholamu, ezibhalwe ngoonobumba ukusuka ku-A ukuya kwi-infinity, ungakhetha ozifunayo (5 okanye 7), cofa iqhosha lasekunene lemouse kwaye ukhangele Ububanzi beKholam ukuze uyinike ngaphezulu okanye ngaphantsi isithuba.
Wakuba uyigqibile, kuya kufuneka uyiprinte kuphela.
Sicebisa ukuba ushiye iintsuku zeveki njengamaxabiso angagqibekanga. Ngale ndlela kuya kuba ngcono.
Ukuba into ofuna ukuyenza yikhalenda yonyaka, kufuneka usebenze ngeetafile ezahlukeneyo. Isenokuba kwiphepha elinye, kuphela nje nyanga nganye iya kuba ncinane ukuze ilingane ngendlela ofuna ukuba nayo okanye ukuyiprinta.
Amaphepha e-intanethi ukwenza iikhalenda ezihonjisiweyo
Ukuba awufuni ukwenza iitafile, beka izithuba ... kutheni ungasebenzisi iitemplates ze-intanethi? Maninzi amaphepha kunye nezixhobo ezikwi-intanethi zokwenza iikhalenda. Ngapha koko, unokwenza inyanga enye, iinyanga ezintathu, okanye iikhalenda zonyaka ngaphandle kokuba usebenze kakhulu kuyilo lwazo kuba ziya kuza ziyilwe kwangaphambili kwaye zilungele ukuba wenze ngokwezifiso kancinci kwaye yiyo loo nto.
Ezinye ze amaphepha esiwacebisayo Zizo:
Kwaye ngokuqinisekileyo unako kwakhona khetha ukuyenza ngePhotoshop, GIMP okanye nayiphi na enye inkqubo yokuhlela umfanekiso. Kuya kuthatha ixesha elide, kodwa ungayenza ngokwezifiso ngokupheleleyo.
Ngaba udla ngokwenza ikhalenda yenyanga nganye? Ngaba unesibindi sokwenza enye ngoku?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Uyenza njani ikhalenda